AMBODIANGEZO ANDAPA : Tsy ankasitrahan’ny olona ny fisavana trano ataon’ny Zandary
Miady amin’ny firongatry ny halatra lavanila ny Mpitondra fanjakana any amin’ny Faritra Sava, miaraka amin’ireo avy ao amin’ny PRCP (Fivondronan’ireo mpandraharaha miady amin’ny halatra lavanila) sy ny Zandarimariam-pirenena. 21 avril 2017
Noho izany, dia misy ny hetsika fisavana tokantranon’ny olona tsirairay ataon’ny Zandarimariam-pirenena avy ao Ambodiangezo, Kaominina ambanivohitr’Andapa.
« Mitaraina ireo mponina ao Ambodisatrana, tanàna 3 kilaometatra miala an’Ambodivoegny, fa mahamenatra azy ireo ny fisavana trano ataon’ny Zandary satria tsy misy taratasy mazava avy amin’ny Fitsarana ny fanaovan’izy ireo izany. Satria heverin’ny manodidina fa mpangalatra lavanila ny mponina nefa mpamboly lavanila ka rariny raha misy lavanila ao an-trano », hoy ny solontenan’izy ireo, izay milaza ihany fa tsy manaiky ny fanaovana io fisavana trano io.
« Fantatra fa tamin’ny volana janoary tany dia tsy vitan’ny misava trano fotsiny ireo mpitandro filaminana fa mbola sahy mitaky vola ihany koa na misy lavanila na tsia ao amin’ireo trano savaina », hoy ny filazany. Vola be tokoa no voalaza fa notakian’izy ireo amin’ny mponina.
Ny mahagaga amin’ity raharaha ity anefa dia fantatra fa faritra mpamokatra lavanila ny Faritra Sava iny ka rariny raha toa ka misy lavanila ny tranon’olona any amin’ny Faritra.
Amin’ireo mponina dia fanamparam-pahefana no ataon’io tompon’andraikitra avy ao amin’ny Zandarimariam-pirenena ao Ambodiangezo io atao amin’izy ireo.
Noho izany dia manao antso avo amin’ny Fanjakana mahefa ny mponina ao Ambodisatrana fa indrindra indrindra amin’ny tompon’andraikitry ny Zandarimariam-
pirenena mba hijery akaiky ny zavatra manjo azy ireo.